Revolisiona andala-panovana an'i Madagasikara! | Hevitra MPANOHARIANA |
Revolisiona andala-panovana an'i Madagasikara!
2013-07-04 @ 10:11 in Ankapobeny
Hiresaka tena revolisiona avy amin'olo-tsotra, mety ho tsy mahalala akory ny asan'ny tambajotra an-tserasera, aho. Revolisiona tsy manimba zavatra na mandroba fananan'olona fa revolisiona ho amin'ny fivoarana tokoa mba hilaharan'i Madagasikara tsikelikely amin'ny firenen-kafa ka tsy ho menatra amin'ny azy intsony afaka fotoana vitsivitsy raha henatra hatrany no nentina nandritra ny fotoana maro.
Fa araka ny mahazatra dia hiresaka zavatra hafa tsy misy idirany vetivety aho fa sao lazaina ho tsy te-hiresaka ny politika eto Madagasikara. Nisy manko ny fampihaonana ireo filoham-panjakana voafidim-bahoaka teo aloha sy ny filohan'ny tetezamita, napetraky ny miaramila nanongam-panjakana ho amin'izany voninahitra izany, nokarakarain'ny FFKM ny andron'ny 3 jolay 2013. Raha ny tokony ho izy dia ny filoha voafidim-bahoaka mbola velona rehetra no nihaona tamin'ny filohan'ny tetezamita, saingy nandamoka moa izany fampihaonana izany, na dia mbola notanterahina ihany aza, noho ny fanakanana ny iray amin'ireo filoha teo aloha voafidim-bahoaka nanao ny sesintany ny tenany tany Afrika Atsimo, tsy hiditra eto Madagasikara. Ny fanakanana dia avy amin'ireo mpitariky ny tafika eto Madagasikara fa mpanatanteraka fotsiny ihany ny sivily eo amin'ny fitantanana, toy ny filohan'ny tetezamita na ny lehiben'ny ACM (Aviation Civile de Madagascar).
Hevitra tsotra ny ahy raha manaraka ny toe-java-misy aho. Nataon'ireo lehiben'ny tafika izay hampandamoka io fampihaonana io ho fampandresen-dahatra fa tsy lalana mankany amin'ny vahaolana velively ny fampihaonana kasaina hotanterahina na aiza na aiza eny fa na eto Madagasikara aza. Ny tsikaritra anefa dia tsy tena izay fampandresen-dahatra izay no midona any amin'ny vahoaka fa ny sarin'ilay tafika malagasy matahotra olona iray, matahotra ny vali-fingika fingàka avy aminy, satria efa andala-pahafantarana ihany ny olona hoe ny tafika no tena mitondra fa saribakoly mahafatifaty ihany ilay aderadera vahoaka. Misy moa ny miteny fa ny Renimalala indray no ao ambadiky ny miaramila, ka asa na resy lahatra amin'izany ianao na tsia. Koa eritreritra ihany ny ahy fa raha ny tafika hatrany no mampametraka olana dia ny vahaolana tsara indrindra "andrasana" dia avy ao amin'ny tafika ihany koa ny vahaolana, fa ny tsy mbola hitako tsara dia ny hoe mila fanomanana henjana sy fiaraha-miasa avy amin'ny sivily mahatarika ny olona hidina an-dalambe, tahaka ny any Ejipta ve izy ity, dia ry zareo ao amin'ny tafika no mamita ny ambiny? Na olo-tsotra ao an-toerana sy iraisampirenena aza dia misy mihevitra fa mety ho lasa tahaka ny any Pakistan na Alzeria (vakio ato sy ato ary ato ny globalvoices teny malagasy miresaka momba izany) ny toe-javatra amin'izay fotoana izay, izany hoe tsy mitsahatra intsony ny krizy na naharitra taona maromaro niteraka fampihorohoroana avy amin'ny mpanohana ny FIS. Risika tsy maintsy raisina izany fa raha tiana sy tsy mampaninona moa ny toe-draharaha ankehitriny eto Madagasikara dia tsy ilaina mihitsy ny fidinana an-dalambe (sady tsy maintsy hisy ihany ny fanararaotana ataon'ny sasany handroba sy hanimba rehefa tsy manana fifehezana ny maro).
Izay no ela fa ilay revolisiona nisoko mangina saingy nahery vaika amin'izay no lazaiko. Nahery vaika satria avy amin'ny saranga ambanimbany na antonontonony tsy voatery ho liana politika no niaviany. Resaka vola izany, ilay ravi-taratasim-bola iny e! Iza indray no tsy mahalala fa malaza amin'ny haratsiam-bola taratasy ny eto Madagasikara. Maro amin'ireny vola ireny, indrindra fa ireo sanda ambanimbany, no tsy hita intsony izay endrika tsara maha-vola azy fa dia rehefa hita hoe tahaka ny vola tokoa izy izany dia raisina ilay izy ary mivezivezy eny rehetra eny. Ny eto afovoan-tany no tena malaza ratsy amin'io vola ratsy sy maloto io fa mba efa nisy ny fotoana nidinana tany Toamasina, folo taona mahery lasa izay, fa mba tsara endrika ihany ny any amin'ny tanàna toy ireny. Ny dingana voalohany moa, araka ny fantapantatra avy amin'ireo niresadresaka amin'ny tena ihany, dia tany Antsirabe no niavian'ity revolisiona milamina nefa mahery vaika ity no tonga teto Antananarivo avy eo. Rehefa teto Antananarivo indray dia teo amin'ny tsenan'Anosibe no niaingany ka niely tany amin'ireo ambany tanàna hafa vao nanerana an'Antananarivo renivohitra. Nanao ahoana ny fizotry ny revolisiona? Tsy manaiky vola rovitra nasiana scotch intsony ny mpivarotra sy ny fiara fitaterana ary ireo toera-pihinanan-kanina mahazatra ny olo-tsotra miavo-tena. Na aiza na aiza alehanao amin'ireo toerana voatonoko ireo dia vitsy sisa ny olona mandray vola misy scotch na dia mbola tsara endrika aza ny volanao. Moa va tsy revolisiona tsara izany ry zareo?
Mbola vao dingana voalohany ihany io fa efa mandeha tsikelikely ihany koa ny dingana faharoa, mbola mandray vola malazo dia malazo ihany manko ny maro hatreto rehefa tsy rovitra na tsy misy scotch ilay izy, saingy efa manomboka tsy mety handray vola malazo sy ratsy dia ratsy endrika ihany koa ireo mpivaro-madinika (tahaka ny mpivarotr'anana) noho ny fanahiana mahamora rovitra ny vola ka sao tsy raisin'ny mpanjifa eo. Raha izao no mitohy dia mety ho avy ihany koa ny tsy fanekena ny vola maloto na miforiporitra (na dia tsaratsara endrika aza) ary hiafara amin'ny tsy fanekena vola miforitra indroa na in-telo. Dia hiafara amin'ny fahatsaran'ny vola malagasy sy ny fahadiovan'endriny ihany izany fizotry ny toe-javatra izany ary, raha izaho manokana dia faly amin'izany satria efa ho roapolo taona izay no tsy nanekeko io endri-bola malagasy maloto sy rovidrovitra ary miforiporitra io. Fa ny fanontaniana dia izay mety ho tena nahatonga ity revolisiona ity. Ny nalaza tany Antsirabe dia nisy ireo tsy manaiky ilay vola misy scotch fa hoe raisiny atsasa-bidiny io raha raisina ihany. Ny ahy kosa tombatombana fa noho ny fahamaroan'ny Malagasy tsy mahay mamaky teny sy manoratra ka tsy mahita ny fahasamihafan'ny laharam-bola nefa tsipahin'ny hafa no nandraisany fepetra tsy handray izay vola rehetra misy scotch. Ekena tokoa fa misy tsy mahamety ny fitsipahana ilay vola tokony mbola miasa sy manan-kery nefa misy lalana hafa azo aleha ankoatra izay mitranga amin'izao fotoana izao ve? Izay no zavamisy eto Madagasikara ry zareo fa ny faniriana dia ny hahatontosa izany haingana dia haingana ho hatramin'ny farany...
Jentilisa 04 jolay 2013